Dhacdo qalbigaaga taaban doonta “Gabadh Dil ka badbaadey “ - iftineducation.com
iftineducation.com – Gabar ayaa habeen waxay ku soo daahday xaafada ay daganeyd gabar kale oo ay saaxiibo yihiin, kadib way soo baxday, intii ay wadada mareysay ayey cabsi dareentay maadaama ay wadada cildo aheyd, waxayna talo saaratay Allaah, wax yar kadib waxay aragtay nin geed horteeda ah ku gambanaya way naxday waxay Allah ka barisay inuu badbaadiyo ayadoo ducooyin badan afka ku heysa ayey si tartiib ah ninkii u ag martay, gurigeedii ayeyna si nabad ah ku tagtay.
Subixii ayey waxay maqashay in wadadii ay soo martay geedkii ninku ku jiray agtiisa lagu dilay gabar, xiliga uu dilka dhacay waa qadar 10 daqiiqo camal kadib markii ay meesha martay,
Waxay dareentay in ninka dilka geystay uu yahay kii ay soo agmareysay, si ay police-ka ugu sheegto ninka tilmaantiisa ayey aaday saldhiga.
Kadib taliyihii saldhiga joogay ayaa u sheegay in ay hayaan dhowr nin oo habeenkaas la soo qabtay loogana shakisan yahay dilka gabadha in ay geysteen, sidaa darteed wuxuu gabadhii ka dalbaday in ay ragaas wajiyadooda eegto oo ay sheegto hadii uu ku jiro ninka ay habeenkii aragtay.
Gabadhii ayaa si geesinimo leh u soo hor istaagtay ninamkii eedeysanayaasha ahaa waxayna ka aqoonsatay ninkii, wayna sheegtay, ninkii ayaa isna dambigii qirtay.
Gabadhii ayaa taliyaha ka codsatay in ninka loo weydiiyo sababta uu iyada u soo weerari waayay.
Markii la weydiiyay ninkii ayaa ku jawaabay; “kaligeed meysan aheyn, waxaa dhinacyada ka socday laba nin oo dhaadheer oo xoog badan.”… Subxaanalaah.
RIIX HALKAAN KA DAAWO MUUQAAL NAXDIN LEH
Daawo muuqaal sir ah fadeexad qabsatay fanaanka maxamed Alta waqtigii arooskiisa